Thiago Alcantara Oo Cadeeyay Sida Uu Wali U Jecel Yahay Kooxdiisii Hore Ee Barcelona Isaga Oo Albaabka U Furay In Uu Camp Nou Ku Laaban Karo. – WWW.Gool24.net
Thiago Alcantara Oo Cadeeyay Sida Uu Wali U Jecel Yahay Kooxdiisii Hore Ee Barcelona Isaga Oo Albaabka U Furay In Uu Camp Nou Ku Laaban Karo.
Xidiga khadka dhexe ee xulka qaranka Spain iyo kooxda Bayern Munich ee Thiago Alcantara ayaa dareen fiican ka muujiyay sida uu u jecel yahay kooxdiisii caruurnimo ee Barcelona taas oo uu ka soo baxay xarunteeda caanka ah ee La Masia. Thiago ayaa kooxda kowaad ee Barcelona ka mid noqday isaga oo 18 sano jir ah wuxuuna ka mid ahaa ciyaartoydii da’yarta ahayd ee ugu fiicnayd markii uu Guardiola ka ariminayay Camp Nou.
Laakiin markii uu Thiago waqti fiican oo uu ku ciyaaro ka waayay Xavi Heranandez, Andres Iniesta iyo xidigihii muhiimka ahaa ee waqtigaas Barcelona shaxdeeda muhiimada kowaad ku lahaa waxa uu sanadkii 2013 kii ku biiray kooxda Bayern Munich oo uu kula midoobay Pep Guardiola oo ahaa macalinkii Camp Nou ku soo gardaadiyay.
Laakiin Thiago ayaa waraysi uu siiyay Catalunya Radio waxa uu ku muujiyay sida uu u jecel yahay Barcelona isaga oo waliba cadeeyay suurtogalnimada uu markale ugu ciyaari karo kooxdiisii hore ee Barcelona. Inkasta oo uu Thiago heshiis cusub oo 2021 dhacaya u saxiixay Bayern Munich wuxuuna hoosta ka xariiqay in markasta wax isbadali karaan.
Thiago Alcantara oo ka hadlaya kooxdiisii hore ee Barcelona oo waqtiyadii la soo dhaafay lala xidhiidhinayay ayaa yidhi: “Barcelona markasta waa gurigaygii, kaliya ma aha in aan kooxda jecelahay, laakiin sidoo kale magaalada ayaan jecelahay. Markasta waxaan ku eegaa jacayl”.
Intaa kadib Thiago ayaa hadlay suurtogalnimada uu Barcelona ugu soo laaban karo wuxuuna yidhi: “Waligaa ma ogid haddii aan dib u soo laabanayo, sababtoo ah waxaan xaqiiqdii ku faraxsanahay Bayern, laakiin kubbada cagtu in badan ayay isbadashaa, wax walba way dhici karaan”.
26 sano jirkan ree Spain ee Thiago oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Sanadkii hore heshiiskayga ayaan cusboonaysiiyay iyada oo ay ujeedadaydu ahayd in aan sanado badan sii joogo, laakiin marka uu xili ciyaareedku dhaafo, waxaad noqon kartaa mid in badan ama in yar raaxaysta. Kooxda ayaa dhinac u socon karta, fikradayda ayaa jaho kale ii kaxayn karta”.